आमोस3ERV-NE - इस्राएललाई - Bible Gateway
3 हे इस्राएलीहरूहो! यो समचार जो परमप्रभुले मिश्रबाट उहाँले ल्याउनु भएका तिम्रा परिवार र तिमीहरूको विरुद्ध भन्नु भएकोछ।2“विभिन्न धेरै परिवारका मानिसहरूले पृथ्वी भरिनेछ। तर ती मध्ये केवल तिमीहरूलाई मैले चिनेकोछु र बिशेष ध्यान दिएकोछु तर तिमीहरू मेरो विरुद्धमा खडा भयौ। यसकारण, म तिमीहरूका सबै पापहरूका निम्ति तिमीहरूलाई दण्ड दिनेछु।”
इस्राएलले सजाए पाउने कारणहरू
3 दुइ जनाको आपसमा सहमत् नभए सम्म
सँग-सँगै हिँड्न सक्तैनन्।
4 के बुढो सिंह जङ्गलमा
आफ्नो शिकार पाउनअघि गर्जन्छ?
के जवान सिंह शिकार नसमातिकन
गुफा भित्र गर्जन्छ?
5 जबसम्म तिमीले जालमा चारो हाल्दैनौ
चरा पक्रनु सक्दैनौ।
अनि जब जाल माथिउठ्छ
यसले चराहरू पक्रनेछ।
6 के युद्धको तुरहीको ध्वनी सुनेर
अनि यदि शहरमा कष्टहरू आउँछ भने
त्यो परमप्रभुद्वारा पठाइएको हो।
7 मेरा स्वामी परमप्रभुले सबै कुरा गर्न सक्नु हुन्छ। तर केहिगर्नु अघाडी उहाँले आफ्नो सेवक अगमवक्तालाई योजना देखाउनुहुन्छ। 8 यदि कुनै सिंह गर्जियो भने मानिस अवश्य नै डराउँछ भने यदि परमप्रभु बोल्नु हुन्छ भने, उहाँको सूचना घोषणा गर्न कसले उहाँलाई रोक्न सक्छ?
9-10 अश्दोद र मिश्रका किल्लाहरूमा यो वचन घोषणा गर, “सामरियाका पहाडहरूमा आऊ। त्यहाँ तिमीले गोलमाल पाउँनेछौ। किनभने त्यहाँ अपराध गरिएको छ। तिनीहरू एक-अर्कामा सहीतरिकाले बाँच्न जान्नदैनन्। तिनीहरूले तिनीहरूको किल्लामा डकैती र लुटेका मालहरू थुपार्छन्।”
11 यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “त्यो देशमा एकजना शत्रु आउनेछ, त्यो शत्रुले तिमीहरूको सुरक्षा कुल्चिन्छ। उसले तिमीहरूको चिज लिएर जानेछ जुन आफ्नो किल्लामा लुकाएर राखेका छौ।”
12 परमप्रभु भन्नु हुन्छ,
“जसरी गोठालोले सिंहको मुखबाटथुमा बचाउँदा,
उसको दुइ खुट्टा र एउटा कान मात्र बचाउन सक्ला,
त्यसरी नै विलासीपूर्ण सोफामा
र रेशमी ओछ्यानहरूमा सुत्ने
सामरियामा बस्ने इस्राएली मानिसहरू मध्ये
कोहि मात्र सुरक्षित रहने छन्।”
13 मेरा स्वामी सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर यो कुरा भन्नु हुन्छ, “याकूब को घरनाका मानिसहरूलाई यो कुराहरूको चेतावनी देऊ। 14 परमप्रभुले न्याय दिनेदिनमा म इस्राएललाई उसका पापहरूको लागि दण्ड दिनेछु। म बेतेलका वेदी नष्ट गरिदिनेछु र समस्त वेदी भुईँमा खस्ने बनाउँछु। 15 म गर्मिमा बस्ने निवास स्थानका साथै शीतकालिन निवास स्थान पनि नष्ट पारिदिनेछु। अनि हात्तीको दाँतले बनाएका घरहरू पनि नष्ट गरिदिनेछु, धेरै घरहरू नष्ट गरिने छ।” परमप्रभु भन्नु हुन्छ।